60W Pancellicall Silicon Solar Panels China Emeputa
Nkọwa:Solar Energy Polycrystalline Silicon Cell Panel,Ihe Ndị Na-ahụ Maka Ike Ike Ụlọ,Mpempe akwụkwọ na-enwu enyo
Solar Energy Polycrystalline Silicon Cell Panel,Ihe Ndị Na-ahụ Maka Ike Ike Ụlọ,Mpempe akwụkwọ na-enwu enyo
Home > Ngwaahịa > Ngwa igwe na panel > Polycrystalline Solar Panels > 60W Pancellicall Silicon Solar Panels
Ubu oke: 40000pcs/day
Mkpụrụ ndụ ndị dị na silicon cell polycrystalline nke dị na mbara igwe bụ ọgbọ ọgbọ nke mbara igwe dị na mbara igwe, bụ nke nwere uru dị ukwuu nke ịgbanwere akụrụngwa, ogologo ndụ nke mkpụrụ ndụ mkpụrụedemede monocrystalline na usoro nkwadebe dị mfe nke ihe batrị nke ihe nkiri batrị nke amorphous.
1. Igwe: Igwe na-acha ọcha nke na-acha ọcha nke na-acha ọcha, ọkpụkpụ 3.2 mm, na nzaghachi ntụgharị nke ntụgharị wavelarngth (320-1100 nm) dị ka 91%, na-eguzogide ọgwụ radiation radiation, transmittance anaghị ada. Akụkụ nke iko a na-agbagharị agbagọ nwere ike iguzogide mmetụta nke diamita 25 mm ice hockey na 23 m / s.
2. EVA: Akwukwo ihe ngosi nke EVA na oke ogugu nke 0,5mm ka eji eme ihe maka ikuku oku na njikọ nke film EVA na iko na TPT. Ọ nwere ikike transmittance na ike ịka nká. Ihe ndị a chọrọ nke ihe nkiri EVA mgbe nkwakọ ngwaahịa sistemụ dị na ya bụ: transmittance karịrị 90%; akara nrịta nke kariri 65-85%; ume ike (N / cm), iko / ihe nkiri karịrị 30%; TPT / ihe nkiri karịrị 15%; elu okpomọkụ: ogo 85, ogo ogo 40 dị ala.
3TPT: okpukpu ụbụrụ nke anyanwụ, mgbochi ịka nká, mgbochi mmebi, mgbochi ikuku ultraviolet, ikuku ikuku na ihe ndị ọzọ dị mkpa.
4. Ogwe: aluminum alloy etiti, akwa ike, mmetụta dị ike mmetụta.
5. iko iko nwere ikike nke nhicha onwe gị, nke na-ebelata ohere nke uzuzu ugbo na-emetụta ike ịrụ ọrụ ike.
Dịka mkpa nke ndị ahịa si dị, mmepụta nke oghere igwe iji gboo mkpa ndị ahịa, a na-eji ngwaahịa na-eme ihe, na-egwuri egwu anyanwụ, ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ anyanwụ, ìhè anyanwụ n'okporo ámá anyanwụ, usoro ọrụ ike nke anyanwụ, na ihe ndị ọzọ, kamakwa iji gboo mkpa nke ndị ahịa maka ngwaahịa dị iche iche.
Ihe Ndị Na-ahụ Maka Ike Ike Ụlọ
Mpempe akwụkwọ na-enwu enyo